ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ ( ဒုတိယပိုင်း )
မြန်မာနိုင်ငံကို ဗဟိုဦးစီးမှုစနစ်နဲ့ တည်ဆောက်လို့မရကြောင်း နှစ်ကြာရှည် ပြည်တွင်းစစ်က သက်သေပြထားပြီးဖြစ်တယ်။ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ဘဝတွေပျက်စီး၊ လူမျိုးစုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ကျဆင်းပြီး၊ တစ်ချိန်က အာရှကျား မြန်မာဟာ၊ အခုတော့ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ဆင်းရဲနွံထဲ ကျရောက်နေပြီး၊ ကမ္ဘာက မြန်မာကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သူတွေ၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသူတွေ၊ စစ်ကိုအားပေးသူတွေအဖြစ် မြင်နေကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေ Moblile Legand၊ PUBG တို့ဆော့တဲ့အခါ မြန်မာလို့ဆိုရင် တစ်ခြားနိုင်ငံက ပြိုင်ဘက်တွေဆီမှာ အဆဲခံရတဲ့အဆင့်။ အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့အုပ်ချုပ်မှုထဲကနေ ဖောက်ထွက်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံက လူထုတစ်ရပ်လုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို တည်ဆောက်ကြည့်ကြရအောင်။
၆။ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ရှိမှုနဲ့ NUG
ဖက်ဒရယ်စနစ်အမြစ်တွယ်လာဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်း၊ လူတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သို့သော် အစုအဖွဲ့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား လုပ်နိုင်စွမ်းဂ အလားအလာ၊ အင်အားချင်း မတူညီကြတဲ့အခါ တာဝန်ရှိမှုနဲ့ တာဝန်ယူနိုင်စွမ်းဟာကွဲပြားသွာတယ်။ ဥပမာ ဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းအတွက် AA ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ALP ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာ ကွာခြားသလိုမျိုးပေါ့။ NUG မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့နောက်မှာ ပြည်သူထောက်ခံမှုအများဆုံးရထားလို့ပါ။ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ ပြည်မက ဗမာလူထုရဲ့ထောက်ခံမှု သာမက အခြားပြည်နယ်က ပြည်သူလူထုလည့် သူတို့နောက်မှာရှိပါတယ်။ ပြောချင်တာက ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ပုံဖော်ဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိရင်တောင် သူတို့က ဦးစီးဦးဆောင်မပြုနိုင်ဘူး။ NUG မှာတော့ သူတို့ထက် အလားအလာ၊ အရည်အချင်း၊ တာဝန်၊ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အားကြီးတဲ့သူက သဘောထားကြီးဖို့သာလိုတာ။
သို့သော် NUG/CRPH/NUCC တို့ဆိုတာ ၂၀၂၁ မြန်မာစစ်တပ်က အရပ်သားအစိုးရ NLD ထံမှ အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အနိုင်ရ NLD ပါတီဝင်အများစု လွှမ်းမိုးထားတဲ့အင်အားတစ်ခု။ ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၂၀ အထိ ၅ နှစ်တာကာလမြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ့အခါ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ပေါင်းပြီး တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်ခဲ့သူတွေ။ ဥပမာ ရခိုင်ပြည်မှာ AA နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ပွဲဖြစ်တော့ NLD အစိုးရက AA ကို အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အဖြစ်ကြေညာတာ၊ သမ္မတရုံးကိုယ်တိုင်က ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး အပြုတ်တိုက်ခိုင်းတာ၊ ကရင်နီပြည်နယ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ထု အတင်းစိုက်ထူတဲ့ ကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နေစရာမလိုဟု ပြောဆိုမှုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို လက်နက်ကိုင်တောင်းဆိုစရာမလို၊ ငြိမ်းချမ်းချင်ရင် NCA ကို လက်မှတ်ထိုးကြ၊ အစရှိသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရလူထွက်ဖြစ်တယ်။ အဆိုးဆုံးက စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး ရခိုင်ပြည်ကမွတ်ဆလင်လူမျိုးတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရာမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူတွေဆိုတာ ငြင်းမရဘူး။
၂၀၀၈ ခြေဥကြောင့် အလွဲလွဲအလျော်လျော်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ၊ ခု ၂၀၀၈ ကို ထောက်မခံတော့ဘူး၊ ဖျက်သိမ်းပြီး ပြီးဟု ဆင်ခြေပေးပါလိမ့်မယ်။ NLD အမှားဟာ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၀၈ ခြေဥအောက် ဝင်မိပြီး ထိုအချိန်မှ စပြီး တောက်လျောက်အမှားတွေ ထပ်တလဲလဲလုပ်ဆောင်လာတာဘဲ။ NUG အနေနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိဖို့ ထောက်ပြတာဖြစ်တယ်။ အတိတ်က အပြစ်တွေဟာ ယခု ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာမှာ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေမယ်။ ဒါတွေကို ကျော်လွှားဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ယူဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ တိုင်ရင်းသား လက်နက်ကိုင်အင်အားစုအသီးသီး၊ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးထံမှ ယုံကြည်မှုကို ဦးစွာတည်ဆောက်သင့်တယ်။ ထိုသို့ NUG နှင့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကြား အပြန်အလှန် နားလည်မှုတည်ဆောက်နိုင်အောင် NUG အနေနှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် တာဝန်အချို့လည်း ရှိလာပြန်ပါတယ်။
၇။ ဖက်ဒရယ် ပဋိညာဥ်
CRPH က ဦးဆောင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋီညာဥ်ကို အခြေခံပြီး တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တို့ကိုအာမခံသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ဆိုတယ်။ ဦးဆောင်ရေးဆွဲတဲ့အခါ အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအချို့ ပါဝင်တယ်။ တကယ်ဘဲ ဒီပဋီညာဥ်ကို ရေးဆွဲအတည်ပြုပြီး ကျင့်သုံးလိုက်ရုံနှင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး မျှော်လင့်နေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို အကောင်းအထည်ဖော်နိုင်မည်လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ ပဋိညာဥ်ကို ရေးဆွဲတဲ့အခါ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီက လူထုတစ်ရပ်လုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်းတွေ ပါဝင်သလား? တစ်တိုင်းပြည်လုံးက လူထု၏ဆန္ဒကိုကိုယ်စားပြုသည့် ပဋိညာဥ်ဖြစ်သွားပြီးဟု ဆိုပါအုံ့။ လွတ်လပ်ရေးယူဖို့ ပြည်ထောင်တွေစုစည်းခဲ့ကြတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကိုတောင် အာကြီးသူအာဏာပိုင်တွေ ချိုးဖောက်ကြတာ၊ ဒီ ပဋီညာဥ်လောက်ကိုတော့ မချိုးဖောက်ပါဘူးဟု ဘယ်သူ ဘယ်လောက် အာမခံနိုင်မလဲ?။
NUG အနေနဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမှာက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနှင့် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကို ကြိုးစားတည်ဆောက်ရမယ်။ ဘယ်လက်နက်ကိုင်အုပ်စု၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကမှ လူထုကိုတောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးလာတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ဆက်ဆံချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ AA ရဲ့ နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်မတူညီတော့၊ မပါဝင်လို့ဆိုပြီး အားမလို အားမရဖြစ်နေလို့လည်း ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ တစ်ခြား ပြည်နယ်တွေက အင်အားစုတိုင်းနှင့် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးပြသနာကို ​သုံးသပ်ရရင် ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီမှာ ချုပ်ထွေးလှတဲ့ လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာ တွေ့မြင်နိုင်တယ်။ ဒါတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ NUG အနေနှင့် နိုင်သလောက် ဝင်ရောက်ကူညီနိုင်ရမယ်။ ဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းကို လျှောက်ကြတဲ့အခါ ပြည်နယ်တွေက ပြသနာတွေကို ဦးစွာဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ ထို့နောက် ပြည်နယ်တွေအချင်းချင်း ကြားမှာတောင် ညှိနှိုင်းစရာတွေရှိနေတယ်။ လူမျိုးပျံနှံ့နေထိုင်မှုပြသနာ၊ နယ်မြေအငြင်းပွားမှုပြသနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာမှာဘဲ။ ဒါတွေကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေက ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးနောက် ပြည်နယ် unit ၈ ခုကြား အာဏာ၊ သယံဇာတအရေးတွေကို အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးရအုံ့မယ်။ စစ်ကိုင်ပြည်ထောင်၊ မန္တလေးပြည်ထောင်၊ ရန်ကုန်ပြည်ထောင်မဟုတ်ဘဲ ဗမာပြည်နယ် ပေါ်ပေါက်လာအောင် NUG အနေနဲ့ တာဝန်ယူရမယ်။ နောက်ဆုံး unit ၈ ခု ကို စုစည်းပေးနိုင်မည့် ပင်လုံစာချုပ်လိုပုံစံမျိုး၊ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေး ပဋိညာဥ်စာချုပ်တစ်ခုကို ချုပ်ဆိုနိုင်ရမယ်။ ဒါက ပြည်နယ်တွေကို စုစည်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု။
နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံ ပေါ်ပေါက်လာရေးဖြစ်တယ်။ ပြည်နယ်တွေကလည်း ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအသီးသီးကို ရေးဆွဲရမယ်။ ပြည်နယ်တွေပေါင်းပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကိုလည်း ရေးဆွဲရမယ်။ အာဏာ၊ သယံဇာတ၊ အခွန်အခ ခွဲဝေမှုတွေကို ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အတိအလင်ဖော်ပြထားမယ်။ ဘယ်လောက်ပင် အပြောကလွယ်၊ အလုပ်ကခက်တယ်လို့ဆိုဆို ဒါတွေကို မလုပ်လို့မှမရတာ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ မဖြစ်နိုင်ရင်၊ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနည်းလမ်းကို သုံးကြပါ။ ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် စုပေါင်းခေါင်းဆောင်ခြင်းကို စံတန်းဖို့တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ယုံကြည်သည်ဟုတောင် ပဥိညာဥ်မှာ ဖော်ပြထားတာ။
နောက်တစ်ချက် NUG ကို ထောက်ပြချင်တာက၊ ၂၀၀၈ ကို ဖျက်သိမ်းပြီဟု ကြေညာထားပြီးဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရ၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေကို ဘယ်အခြေခံကနေဖွဲ့စည်းထားတာလဲ၊ သမ္မတကိုရော ဘယ်အခြေခံကနေ ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတာလဲ? ဒါက နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံတဲ့အခါ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို ပြည်တွင်းက အင်အားစုတွေနှင့် ဆက်ဆံတဲ့အခါလည်း သူတို့ရဲ့အပေါ်စီကနေ ဆက်ဆံသလို၊ စိတ်ထင်ရာလျှောက်လုပ်နေသလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ ရှိသမျှ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကို ဖက်ဒရယ်အာမီဖွဲ့ပြီး NUG မှ ဝန်ကြီးတွေက အုပ်ချုပ်သူနေရာကနေ နေမယ်ဆိုတဲ့သဘော သက်ရောက်မနေဘူးလား။ ဒါတွေက ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည့် အရာတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရှင်းလင်းတိကျပြီး အင်အားစုတိုင်းရဲ့ အမျိုးသားရေးရည်မှန်ချက်တွေကို စုစည်းနိုင်မည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကို NUG အနေနှင့် တာဝန်ယူရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပေသည်။
၉။ တော်လှန်ရေး နှင့် တည်ဆောက်ရေး
တော်လှန်းရေးတစ်ရပ် အောင်မြင်ဖို့အတွက် အဓိကသော့ချက်ဟာ လူထုထောက်ခံမှုဖြစ်တယ်။ လူထုကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်မယ်၊ လူထုကလည်း အနစ်နာခံပြီး တော်လှန်ရေးကိုထောက်ပံ့နေသ၍ တော်လှန်ရေးဟာ မပျက်သွားဘူး။ နွေဦးတော်လှန်ရေးလို့ဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးဟာ လူထု၏ ပံ့ပို့ကူညီအားနှင့် အချိန်တစ်ခုရောက်ရန် အောင်မြင်သွားမှာပါ။ ကချင်မှာဖြစ်တဲ့စစ်၊ ရခိုင်၊ ကရင်၊ ချင်းမှာဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲတိုင်းလိုလိုမှာ လူထုထောက်ခံအားနှင့် အနိုင်ရတာချည်းဘဲ။ သို့သော် သမိုင်းထဲက သင်ခန်းစာအချို့လည်း ရှိနေပြန်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတိုင်းလိုလိုဟာ တစ်ဝက်တစ်ပြက်နဲ့၊ တိုးလိုးတန်းလန်းနဲ့ အဆုံးထိတော်လှန်ပြီး အောင်ပွဲဆင်သွားတဲ့ အဖွဲ့ရယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်တစ်ဖွဲ့မှမရှိသေးဘူး။ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ မယာစက်ကွင်းထဲက တော်လှန်ရေးသမားတွေရဲ့ သန္တိဌာန်မခိုင်တော့ အတုံးအရုံးနဲ့ ကျဆုံးနေဆဲပင်။
တော်လှန်ရေး နဲ့ တည်ဆောက်ရေးဟာ မတူဘူး။ တောင်လှန်ရေးဟာ စနစ်ဟောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဟောင်း၊ လူအဟောင်တွေကို ဖြိုသတ်ဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်။ ဝါးအိမ်အစား ပိုကောင်းတဲ့တိုက်အိမ်တစ်ခု ဆောက်မယ်ဆိုပါစို့။ ဝါးအိမ်ဟောင်းကို ဖြိုဖျက်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဟာလည်း ထိုနည်း၄င်းဘဲ။ သို့သော် တိုက်အိမ်အသိုက်ဆောက်မည့်အခါတော့ အချိန်ကုန်ခံ၊ ငွေကုန်ခံ၊ အင်အားအကုန်ခံရတယ်။ ရလဒ်ကလည်း ကောင်းမွန်တယ်။ ဘာတွေကို၊ ဘယ်လို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်မလဲ။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအသစ်ကို Nation building နဲ့ State Building ဆိုပြီး အပိုင် ၂ ပိုင်းခွဲ၍ တည်ဆောက်ရမယ်။ Nation building ဆိုတာ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်းကြား၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချင်းချင်းကြား အပြန်အလှန်လေးစားမှုပြုပြီး စိတ်ဓာတ်နဲ့ နှလုံးသားတွေ တသွေးတသားတည်းဖြစ်လာအောင် တည်ဆောက်ခြင်းပါ။ အနုနည်းနဲ့တည့်ဆောက်ခြင်းဆိုတော့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ အစစအရာရာ သတိထားရမယ်။ လူမျိုးတိုင်းမှာ ကိုယ်စီဒဏ်ရာရှိနှင်းပြီးသားဖြစ်နေတော့ ဒါတွေကို ပြန်လည်ကုစားမှုပြုနိုင်ရမယ်။ State building ဆိုတာက ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအသစ်ကိုလည်ပတ်မည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်ပရန်ကာကွယ်ရေး ဗျူရိုကရေစီ အစရှိသည်တို့ကို သူ့နေရာနဲ့သူ ရှင်သန်လည်ပတ်နိုင်အောင် ဖွဲ့သည်းတည်ဆောက်ခြင်းပါ။ ဒါတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လူ့အရင်းအမြစ်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ လူမှန်နေရာမှန် အစစအရာရာ သမာသမတ်ကျနေဖို့လိုအပ်တယ်။ Nation building ဟာ စိတ်ဝိညာဥ်ကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး Nation building ဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြံခိုင်အောင်တည်ဆောက်ခြင်းလို့ ဆိုရမယ်။ တော်လှန်ရေးထက် တည်ဆောက်ရေးဟာ ပိုအရေးကြီးကြောင်း သတိထားရမည်ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းတောင့်တနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် NUG ဟာ အဓိကကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုစုစည်းနိုင်မည့် အချင်းချင်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်တွေ၊ ပြည်နယ်အချင်းချင်းချုပ်ဆိုနိုင်မည့် နိုင်ငံရေးစာချုပ်တစ်ခု၊ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံ အစရှိသည်တို့ကို ဦးဆောင်ဖော်ဆောင်သင့်ပေသည်။ Nation building ကိုလည်း အလေးထားဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ State building ကို တည်ဆောက်တဲ့အခါ လူမှန်၊ နေရာမှန်၊ အချိန်မှန်ဖြစ်နေအောင်လည်း ကြိုးပမ်းရမည်။
အထူးသတိထားရမည့်အချက်က တိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းပြီး နယ်ချဲ့အဂ်လိပ်ကိုတော်လှန်တော့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့်တိုင်၊ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဥ် ကျရှံးမှုကြောင်း ဒုက္ခပယ်လယ်ထဲ နစ်နေရသည်မှာ ယနေ့ထက်ထိတိုင်ဖြစ်သည်။ ခုလည်း နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်း တိုင်းပြည်ကိုကောင်းမွန်စွာ မတည်ဆောက်တတ်ရင်၊ ပြည်တွင်းစစ် ပြန်လည်ပေါက်ဖွားပြီး ဖက်ဒရယ်ဂယက်ထဲ တဝဲလည်လည်နှင့် အဆိုးသံသရာရှည်နေအုံ့မှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါသည်။